DOWNLOAD Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D
Tupolev Tu-114 126 FSX & P3D HOT
Ity ny Tupolev TU-114 sy ny TU-126 (126 no modely AWACS). Ity fonosana ity dia dika manokana izay navaozina manokana FSX avy amin'i Andreas Rotowski ary ahitana fanatsarana sy fanavaozana maro. Ny trano fitaterana fiaramanidina dia modely tanteraka amin'ny 3D ary ahafahany mandeha amin'ny làlana. Ity fonosana ity dia misy ny modely 3 sy ireo kitay 3, feo mahazatra (fehikibo seza, fantsona tsy misy setroka) virtoaly virtoaly sy sela 2D sarotra.
Ampidirina amin'ny rakitra feno amin'ny teny Anglisy ary misy mivantana amin'ny aterineto (Manual.html) na ao anaty fonosana. Zava-dehibe ny mamaky ny boky
Ny Tupolev-114 dia sambo mpitondra fiaramanidina Sovietika natsangana tamin'ny 1950.
Ny Aeroflot, ny seranam-piaramanidin'ny USSR, dia nitady mpandeha iray afaka mitondra fifandraisana iraisam-pirenena ary manompo amin'ny maha-showcase sy masoivoho teknolojia azy. Ho fanampin'ny fanampian'ny mpamily, ny sampan-draharahan'ny fikarohana momba ny sivily Andrei Tupolev dia nahatsikaritra ny fiaramanidina Tu-95. Ny Tupolev 114 dia mitana ny fiaramanidin'ny mpamily fiaramanidina lehibe indrindra sy haingam-pandeha haingana indrindra. Izy io dia novolavolaina tamin'ny turboprop efatra Kuznetsov NK-12. Nampiasaina teo amin'ny tsipika: Moscow-Havana, Moscow-Tokyo. Nalaza ny fitsidihan'i Nikita Khrushchev tany Etazonia tamin'ny 1959.
Nolavin 'ny fisehoan' ny fiarabe lava lava toy ny Ilyushin Il-62 izy. (Wikipedia)
Downloads 11 680
Nohavaozina taminy 06-09-2017
Format Port-Over - Tsy mifanaraka P3Dv4 +
Auto-install Installer version 10
Lockheed Martin Prepar3D v1 hatramin'ny v3 ➕ Microsoft Flight Simulator X: Steam Edition ➕ Microsoft Flight Simulator X (All Version)
Samdim Design, repack ny Andreas Rotowski